LuckyBackup, ny backup anao dia tsy dia tsotra loatra | Ubunlog
Efa fantatsika tsara daholo, satria izany no asehon'ny teôria na satria nianarantsika tamin'ny fomba sarotra, izay tena manandanja tokoa. manaova backup tsindraindray. Mazava ho azy, raha ny voalaza ka hatramin'ny mbola misy dia lavitra, hoy ny fitenenana ary izany dia impiry ireo izay, noho ny fahalalany, no tokony hifanaraka indrindra amin'ny teôria ary hanao backup dia ireo izay kely indrindra no manao azy , noho izany very mihoatra noho ny angon-drakitra sarobidy.
Iray amin'ireo antony tsy hianaran'ny rehetra miasa amin'izany backups izany dia satria tsy maintsy manokana fotoana kely ho azy ireo ianao, ary fantaro ny foto-kevitra sasany toy ny atao hoe backup fanampiny. Fa mihoatra ny zava-drehetra, amin'ny tranga Linux, satria tato ho ato dia tsy nanana fitaovana tsotra ho an'ireo tanjona ireo izahay ary tsy maintsy nanao izany manangana amin'ilay fitaovana lehibe antsoina hoe rsync, izay na eo aza ny fahaizany dia manana làlan-dàlana somary avo lenta.
Ka anio no tianay horesahina LuckyBackup, iray amin'ireo maromaro fitaovana backup Soa ihany fa tonga eo amin'ny tontolon'ny Linux izy ireo ary manamora ny zavatra hanombohana hiarovana ny angon-tsika amin'ny fomba mandeha sy voalamina. Ho an'ireo izay tsy mahalala azy dia lazao fa fampiharana izany dia miorina amin'ny rsync voalaza etsy ambony fa manampy interface graphique be dia be izy ary manome safidy tsotra hanombohana nefa handroso raha irintsika.
Noho izany, ao amin'ny LuckyBackup dia azontsika atao ny farito izay lahatahiry na subdirectories tianay esorina amin'ny backup, azontsika atao ny mampiasa safidy lavitra, mametraka fandaharam-potoana famerenana isan-kerinandro na isam-bolana, manampy safidy fiarovana sy encryption ary manana fanohanana ny baikon'ny baiko isika, ankoatry ny fahafahantsika miantehitra amin'ny tombony azo avy amin'ny backup raha tsy misy izany, izany hoe izy ireo afindra fotsiny ireo rakitra efa novaina.
Ankehitriny, toy ny amin'ny zava-drehetra, tsy maintsy manomboka eo am-piandohana ianao, ka ndao hojerentsika ny fomba fametrahana LuckyBackup ao Ubuntu, izay ampiasantsika ny tsipika fandidiana ary manoratra:
sudo apt-mahazo mametraka luckybackup
Avelantsika hanaraka ny fizotrany mahazatra ny fametrahana azy, zavatra izay maharitra segondra vitsy, ary aorian'izay dia ho vonona hampiasa an'ity rindranasa ity izahay. Ankehitriny dia mila mametraka ny tenantsika ao amin'ny dash finder de Ubuntu ary ampidiro ny "tsara vintana" ary avelao hikaroka ilay fampiharana ilay fitaovana, ary rehefa mitranga izany ary atolotra ny valiny, dia tsindrio fotsiny isika hanokatra azy io ary hahita ny efijery voalohany.
Tsotra be izy io ary manolotra antsika ny mety hamoronana profil iray na maromaro ho an'ny fitantanana ny backups anay, amin'izy ireo dia azontsika atao ny manampy fampirimana loharano sy toeran-kaleha, izay mety ho eo an-toerana na lavitra (toe-javatra mahasoa tokoa raha manana NAS na amin'ny mpizara sasany). Haavo samy hafa ny haavon'ny lanjany (ambany, mahazatra, be fanakianana) ary misy ny fahaiza-manao manan-tsaina toy ny famoronana fampirimana napetrakay ao anaty backup raha tsy misy izany amin'ny fotoana anaovana izany, izany hoe, tsy hahazo isika hafatra diso fa kosa, LuckyBackup no mikarakara azy.
Mazava ho azy, afaka mandahatra ireo lahasa isika ary na dia hisy aza ireo izay milaza ara-drariny fa mahavita an'io amin'ny rsync sy cron isika, ny marina dia tena tsotra ilay interface natolotry LuckyBackup, noho izany dia mendrika fitsapana ity utility ity. Afaka mandeha any amin'ny tranonkalany izahay ary misintona fonosana ho an'ny disos isan-karazany (sy kinova samihafa) ary mazava ho azy koa ny kaody loharano.
marary mitsika LuckyBackup
Web toerana: LuckyBackup
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » LuckyBackup, ny backup anao dia tsy dia tsotra loatra
Kubuntu 15.10 sy ny birao Plasma 5.4.2 mandroso indrindra